Voadona ve ny hazakazaka 2 sa tsia? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Tetikasa hazakazaka - vahaolana vaovao
Tetikasa hazakazaka - vahaolana vaovao
Voadona ve ny hazakazaka 2 sa tsia?
Flop- Ambany 70 cr nett. Loza - Ambany 55 cr nett. Faminaniana AddaToday (Tombony & Biraon'ny boaty) -Hazakazaka 2tokony hanangona manodidina ny 90-100 cr nett mandritra ny androm-piainana. Midika izany fa ny Distributor Share 45-50 crore rehetra India.
Ao amin'ny tontolon'ny tantara an-trano momba ny fanatsarana trano dia mendri-kaja i Drew sy Jonathan Scott. Ireo mirahalahy kambana kanadiana dia namorona iray amin'ireo seho be mpijery indrindra teo amin'ny tontolon'ny haingo an-trano. Saingy toa ny zava-drehetra ve? Tsy marina.
Izany no antony sandoka tanteraka ny Brothers Brothers. Matahora. Matahora indrindra. ' Na dia miantsena ho an'ny trano aza ny ampahany kely amin'ny mpanjifan'i Scott mirahalahy dia hita fa ny ankamaroan'izy ireo dia efa nifidy ny tranony rehefa tsy vita fifanarahana. 'Azafady mba mivavaha mba ho eo amin'ny tetibola ity trano ity. 'Hoy i Jonathan tamin'i Popsugar:' Manana tompon-trano isika izay nahita trano efa tian'izy ireo.
Miaraka amin'ny zava-drehetra mandeha haingana be amin'ilay seho hitantsika fa tsy mandeha tsara ho an'ny olona izay tsy nanomboka nitady akory. 'Raha fintinina, ny ampahany amin'ny fivezivezena sy ny fijerena trano matetika dia fampisehoana fotsiny - toy ny dinika lava sy lava eo amin'ny mpividy ny trano izay fidiny. 'Izaho no mpivarotra.
Anjarako izany. ' Raha jerena fa ny ankamaroan'ny mpanjifa dia efa manana trano voafantina, azonao atao ny maminavina fa ny isan-jaton'ny olona salama amin'ny seho dia tsy voatery hampiasa an'i Drew ho toy ny trano sy trano. Eny - raha mahita tolotra miverina sy mifanolotra ianao amin'ny fizarana iray dia tena marina izany.
Fa ho an'ireo olona izay miseho miaraka amin'ny lakilen'ny tranony vaovao, dia sombin-kazo ho an'ny fakantsary fotsiny i Drew 'Fa indraindray kosa dia manova ny sain'ny tompon-trano ireo rahalahy. Hoy i Jonathan tamin'i Popsugar: 'Indraindray rehefa asehontsika trano hafa izy ireo dia afaka manao zavatra betsaka kokoa noho ny azon'izy ireo natao noho ny harena ananantsika.' “Aza diso hevitra izahay; Tsy hoe namela ny tetikasany tsy vita ny Property Brothers.
Saingy ny antsasaky ny trano ihany - izay misy efitrano telo ka hatramin'ny efatra - no noravana, namboarina ary namboarina hatramin'ny vavahady noho ny fanampian'ny rahalahin'i Scott. 'Ny olona miseho amin'ny seho dia afaka misafidy izay efitrano havaozin'ireo rahalahy, ary misy aza ny lalàna. Araka ny filazan'ny MSN, ny mpividy trano dia mety hamboarina ny lakozia na ny fandroana azy ireo fa tsy izy roa.
Raha te ho eo amin'ny seho ianao dia mila manapa-kevitra sarotra momba ny toerana tena ilainao io sonia io. 'Jonathan amin'ny fandaharana dia te-hino ianao fa manao ny asa rehetra izy. Fa raha ny tena izy dia izaho no tompon'ny saribakoly. ”Jonathan no endrik'ilay milina fanavaozana ny fananan'ny Brothers Brothers, saingy azo antoka fa tsy izy ilay hozatra.
Rehefa miseho amin'ny fotoan-tsarotra izy, dia misy afisy Reddit izay nanao audition ho an'ilay fampisehoana nilaza fa ny ankamaroan'ny asa dia ataon'ireo mpifanaraka eo an-toerana - voafidy ho eo amin'ilay fampisehoana izy ireo, mitafy zavatra ahazoana aina satria hitondra anao hiasa i Jonathan. 'Efa nanorina ve ianao?' Hoy izy tamin'i Popsugar: 'Raha mahita ny teti-bolantsika hikapoka havia sy havanana ary afovoany aho dia hiditra an-tsehatra ary hanao bebe kokoa satria' Tsy manisa ny fotoanako aho na hanao izay hitsambikin'ny tompon-trano isika ary maro no hatao . ' Raha jerena ny habetsaky ny fihodinan'ny maso sy ny adihevitra mitranga eo amin'ireo mpividy trano mety hananan-tany, dia mety hieritreritra izy ireo fa ny mpivady rehetra tamin'ny fampisehoana dia nametraka fisaraham-panambadiana indray mandeha ary nijanona tsy nihodina ireo fakantsary.
Ny tena marina dia ilay hoe tantara an-tsehatra dia mety ho singa kolontsaina iray hafa fotsiny amin'ilay fampisehoana izay ahafahana mahita azy bebe kokoa. Saingy tsy voafetra ho an'ny mpanjifa fotsiny izany. Ny piraofilina 2017 tao amin'ny New York Times dia nanambara fa raha nandrakotra ny horonantsary tamin'ny faha-5 i JonathanScott, dia nandro ny trano fidiovana teo amin'ny tany, saingy voalaza fa tsy dia nanaitra loatra io fotoana io.
Ka nasain'i Jonathan nitifitra ilay sehatra ireo mpamokatra raha… ”niverina tao amin'ny trano fidiovana kely ary gaga rehefa nahita ny kabine. aza atao izany fa ataoko fotsiny izao satria tiako ianao. ”Fotoana iray hafa, voalaza fa nisy rivotra nifofofofo avy teo amin'ny tafon-tranony sy teo amin'ny lalan'ny trano izay nohavaovan'ireo rahalahy, iray andro talohan'ny fitifirana.
Fotoana mahery vaika. 'Araka ny voalazan'ny Times, dia nandidy mpiasa bebe kokoa tany ivelany ny talen'ny, ary rehefa nilaza izy hoe' Bang! ' mody gaga ireo mpiasa. Avy eo dia nihazakazaka nivoaka i Drew ary nilaza tamin'ny ekipa hoe: 'Midira, ry zalahy! Tsy tiako hiasa any ivelany ianao; be rivotra be! 'misy zavatra momba ilay seho izay tena misy.
Raha ny filazan'ny maro tamin'ny fandaharana dia i Drew sy Jonathan no ekipa fanavaozana kambana tsara indrindra eto an-tany. 'Izany no porofo! Ranomasom-pifaliana izy ireo noho ny 'tsy fanaoko amin'ny fampisehoana fanavaozana hafa, navelan'ireo rahalahy Scott ny singa rehetra nihetsika satria efa nalam-bola avokoa ny zava-drehetra. Jonathan Scott dia nilaza tamin'i Popsugar hoe: 'Ny seho rehetra anananay dia misy tompon-trano mihetsiketsika mitazona ny fanaka rehetra.
Naheno fandaharana hafa aho fa nesoriny daholo izany ary nieritreritra aho hoe: 'Oy, bandy be io.' Ataonao izay hitiavan'ny olona iray amin'ny efitrano iray ary hoy ianao hoe: 'Hihaona aminao aho!' Izay rehetra hitanao amin'ny fahitalavitra dia mijanona. Zahao eto ny iray amin'ireo lahatsoratray farany eto! Plus more Nicki Swif Tsy hisy lahatsoratra momba ny kintana ankafizinao atsy ho atsy.
Misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube anay ary maneno lakolosy mba tsy halainao na dia iray aza.
Inona no mahazo an'i Sonia amin'ny hazakazaka?
Ranvir sy Armaan dia niady lava tao anaty fiaramanidina. Nilaza tamin'i Ranvir i Armaan fa namono izySoniasatria nandositra niaraka tamin'ny volany izy. Notifiriny ny mpanamory fiaramanidina sy ny parachute rehetra, nandositra niaraka tamin'i Omisha izy ary namela an'i Ranvir sy Aleena ho faty tamin'ilay fianjerana fiaramanidina vokatr'izany.
Ny kinovan'ny Pixars Luca tany am-boalohany dia natao hitodika hafa tanteraka, avy amin'ny sarimihetsika goavambe goavambe miafara amin'ny fikatsahana ireo mpilalao majika ka hatrany amin'ny cameo tsy hita avy amin'i John Ratzenberger. Yippee-ki-yay, mpankafy sarimihetsika, izaho no Jan ary ato amin'ity lahatsoratra ity dia aharihariko ny fifarana mifarana an'i Luca sy ny sasany amin'ireo sehatra sy tantara tsy mbola hitanao! Spoiler mialoha, mazava ho azy, koa mitandrema. Talohan'ny nahatongavan'ireo mpanatontosa sarimihetsika Pixar tamina faran'ny mangidy mangidy nifarana ho an'i Luca, hitantsika amin'ny sarimihetsika farany, ny sarimihetsika The Finale dia noheverina ho voalohany dia ady goavambe goavambe izany.
Ity tantara manokana ity dia niankina mafy kokoa noho ny sarimihetsika farany tamin'ny fizarazarana ny olombelona sy ny biby an-dranomasina ary nanangana azy ireo ho antoko roa na tontolo mifanohitra tanteraka, izay nampitovin'ny talen'ny Enrico Casarosa tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny SlashFilm momba ny elanelana misy eo amin'ny Capulets sy Montagues any Romeo & Juliet. Na dia tamin'ny horonan-tsary farany aza ny mponina ao Portorosso dia mbola matahotra ny biby goavam-be any an-dranomasina sy valisoa taorian'ny fitsidihana vao haingana, toa vao mainka nihanahery vaika ity fifanandrinana teo amin'ny tontolo roa ity tao amin'ilay kinova taloha izay nanovana ny drafitra voalohany ho an'i Alberto Kraken, biby goavambe an-dranomasina angano goavambe toa ny angisy goita na horita. Nitsangana i Luca avy eo hiaro sy hiaro ny sakaizany.
Na izany aza, araka ny nolazain'i Casarosa tamin'ny Cinema Blend, ny resadresaka nifanaovany tamin'ny sakaizany akaiky indrindra amin'ny tena fiainana dia nanentana azy hamolavola endrika farany ny famaranana an'ilay sarimihetsika. Ity resaka miova sarimihetsika ity dia momba ny fisakaizan'izy ireo manokana sy ny fomba fifanampian'ny namana tsara hitombo, saingy matetika izany dia mitarika azy ireo amin'ny làlana tena samy hafa amin'ny fiainana izay mitarika amin'ny veloma mangidy. Ho an'i Casarosa ity dia zavatra efa niainany imbetsaka tamin'ny fiainany manokana, nandao ny tranony tany Italia handeha ho any Amerika mba hahatsapa ny nofinofiny momba ny sarimiaina sy ny fanaovana sarimihetsika.
Ary rehefa nametraka ireo hevitra ireo izy sy ny ekipany, nametaka azy ireo ary nanampy ny isa azon'ny mpamorona DanRomer, dia talanjona izy ireo tamin'ny fahatsapany fa horita be dia be izy fa nifantoka kosa, araka ny namaritan'i Casarosa SlashFilm azy, teo amin'ny 'tontolon'ny ankizy sy tsatoka sy tanjona. miaraka amin'ity hevitra somary hafahafa sy hadalana ity: 'Handeha mitaingina Vespa mankany amin'ny filentehan'ny masoandro isika!' Ny mahavariana, amin'ny sarimihetsika farany dia misy atody paska amin'ny sarimihetsika biby goavam-be any an-dranomasina, momba ny afisy ho an'ny Disney fampifanarahana ny '' 20,000 Leagues Under the Sea 'an'i Jules Verne'.
Inona ny lohahevitry ny hazakaza-tsarimihetsika?
Fokomahavarianahoronan-tsarymomba ny herim-po, ny finiavana, ny fisakaizana ary ny tantara an-tsehatra mitaona aingam-panahy momba ny adin'ny lehilahy iray ho lasa angano olympika.
Iza no namono an'i Sonia tamin'ny hazakazaka 2?
Ao amin'ny biraoko aho anio satria nieritreritra aho fa tena hampihomehy raha toa i Thea naneho hevitra momba ny fihetsika sasany nataon'ny disko izay nataon'i Sundee tamiko nandritra ny taona maro? Ka eto aho dia nahita fanelingelenana telo hanehoana azy dia hamaly azy ireo ianao. Faly ve ianao amin'izany, eny, ary raha manantena azy io koa ianao? Kitiho ny bokotra Like etsy ambany, ary raha manana vaovao momba ilay fantsona mihitsy ianao, dia midira azafady ary kitiho ny lakolosy kely! HIIIIIIIIIIAo esorina daholo ny fampandrenesana rehetra ary ho lasa ampahany amin'ny Savage Sandwich Squad ary iza no tsy te ho anisan'ny Savage Sandwich Squad? Huh, samy te ho anisan'ny tropy sandwich wild ny rehetra. Tsara izany.
Tsy haiko ny antony natahorako mafy. Tsy mamely ahy izy, mampanantena aho fa tsia, nanao veloma. Izaho dia andao jerena ireo dian-tongotra diss ka izao aho dia eto amin'ny Craft Episode 14 Efa henonao daholo ny lalan'ny diss nataoko tamin'i Ssundee, marina, eny, ary tianao izy ireo, saingy tena tsy nisy naheno ianao izay nolazain'i Saudi tamiko ary raha ny marina.
Fantatrao fa nilaza tamiko foana ianao ry Craner, distrika tena tsara ireto, ary tompon'ny Alahady ao ianao satria namana mpanohana tsara izy, fa rehefa henonao izany dia azoko antoka fa tsy eo anilako intsony Izy dia tena izy Tracker lovia tsara. Homeko azy ity, eny, salama tsara izy, ka andao hojerentsika raha nandalo an'ity aho. Manantena aho fa izany no mamirapiratra Tianao ve ity tabataba izay tsy distrika ity, tsy izany no distrika, andraso, eto ny distriko.
Tany amin'ny herbDid aho no nanao azy dia vao avy nokikilohan'ny UnionOkay aho ka ny lahatsoratra iray manontolo. Heveriko fa tsy nisy distrika ho an'izany. Nanao fikarohana aho, Bo aho, okay.
Vao nivoaka ny saiko. Na izany na tsy izany, nahita ny fanangonana ahy sy Sun Distance Rex izahay, saingy azoko antoka fa io lalana io ihany no misy an'io. Ka andao hihaino an'ity.
Okay, okay? Ny fantsona YouTube dia manana clickbait betsaka kokoa noho ny laharana hookika Bass Pro Shop izay tazoninao mandritra ny iray segondra monja. Avelao aho handeha hanampy anao Andao alao izy hipetraka any Danemarka ianao satria adala ianao Jordan Fface toa kankana maharikoriko Dylan Craner toa an'i Schilling Hoy ianao fa maimbo ny zava-drehetra momba anao tokony handeha any an-danitra any an-danitra aho tsy afaka mafy aminao aho I tazomy hoe 'Vita miaraka aminao aho. Kraner izao.
Ndao haverina ny masoandro Maso be ianao rehefa manitsaka ny mizana. Eny akaiky izahay, ny fivoaranay dia mety hiankina. Nolokoina ny volonao mba hifanaraka amin'ny tsy fitovizan'io lovia io. Miresaka ny fomba nialanao tao amin'ny YouTube ve ianao? Ie mety tokony ho ny mike inona no lanja anao wow? Ie faly be aho mahita ny fomba fanefako.
Milaza aho fa nitovy ianao ry st. Zanaka. Nilaza izy hoe torio izany zazavavy tianao izany, fa rehefa niresaka momba an'i Danemarka ianao, Mm-hmm, dia bandy Sundy Sundy io.
Lazao fotsiny fa hadalana daholo ny zava-drehetra. Manaiky aho. Ie, fa nanao ianao.
Nilaza izy ireo fa toy ny andiany lahy sola an'i Ellen DeGeneres Nahoana aho no hitovy amin'i Ellen DeGeneres? Ny tiako hambara. Tsy te hitovy aminy aho satria lehilahy aho. Aleo ihany handroso, Okay, karazana hafa hitako hoe Noely Sambatra.
Huh miandry koa ve io kamio io? Varotra varotra troll koa izany? Andao hojerentsika ny ampahany amin'ilay lahatsoratra izay anehoany ny olona ao amin'ny distrika satria azoko antoka fa tsara koa io iray io, toy izany rehetra izany. Ity no tena tsara antsika, saingy azoko antoka fa tena tsara io iray io. Zaza.
Aiza izany eto? Krismasy ve ry zalahy? Marina izany tamin'ny Krismasy, ary i Papa. Ie aleo ahodin-tsika fotsiny oh, iza ny anaran'ny reninao, ny anarako, izany no referansa ary avy eo apetrakao izy io ka teo am-piandohana io alahady tena io fa ity ampahany ity angamba no wildest indrindra azony tamiko ka nahatonga ity andiany antsoina hoe Pixelmon Right ity izahay , eny, ary tsy nahazo fandresena tokana tamin'ny Sun DOr Glitzer aho ka zahao ity fizarana ity izao fa fantatrao tsara izany. Ady sarimihetsika matotra niaraka tamin'i Pokemon io, ary tsy nandresy mihitsy aho.
Ie, tadidinao fa mbola mila manao an'io ianao, ny tantaran'ny crane noelinao, hadalana no hitanao fa adala, marina? Nandalo fotsiny aho. Hafahafa izany. Kitra izany.
Maimbo. Tahaka ny fofonain'ny vava volkano, misaotra anao aho mieritreritra fa hiverina any amin'ny diany farany tsy hahavaky ny lamosinao izy. Apetraho amin'ny Dateline izahay.
Fantatrao ny daty asehon'ny daty famonoana olona fa tsy azonao atao ny mamely ny ranjonao amin'ny Internet dia mety, fa samy mahafantatra kosa izahay fa tsy maninona. Maty izy, nanao saribakoly, ahoana no itiavanao an'izany? Tena mahay an'io izy, marina. Ie, noho ireo izay henonao tamiko, tsy tadidiko ve ny anao? Inona? Tsy afaka mampiofana an'ity dia ity ianao.
Tsy fantatro akory, tsy fantatro akory izay nantsoina azyIzany ve ity, heveriko fa ity, tsy tadidinao ve ity, tsia, I2016 Toa ny zanako malalako D. Na mendrika azy ve ianao izany? Ny tiako holazaina dia heveriko fa tsara io iray io. Mahafatifaty tsara tarehy Tena ratsy tarehy.
Mieritreritra aho fa nanapaka an'i Santi, izay mitaky ny habeny. Tsy ianao mihitsy no ho olona izay ny reninao sy ny reninao izay tena ratsy fanahy avy eo naka ny sarinao tamin'ny iPad-ko aho ary nisintona ireo sary, io fika io no ampiasako clickbait be dia be. Tsy zakako mafy toy izany ianao, tsara ity mihinjitra ity.
Heveriko fa ny zavatra tsy tsara ihany momba ity fanamarinana ity dia lava loatra ny chorale oh? Ny fijeriko azy dia mandeha foana toa mifarana eo ho zavatra tsara tokoa ary fantatrao fa tsy tena sandoka ilay hen'omby i Sonia toa ny tsy ananantsika hen'omby fa ataontsika amin'ny fahafinaretana fotsiny araka ny fantatry ny rehetra. Mifampihomehy fotsiny isika, eny, hey, samy mahay tokoa ianareo roa. Misaotra anao, angamba afaka manao iray ianao indray andro any ho tonga tahaka anao Madi Tena mahafatifaty ahy ianao Na izany na tsy izany, heveriko fa ho an'ity lahatsoratra ity Nahafinaritra.
Nangovitra ny tenako ary somary nalahelo indray aho satria vao hitako fa nihatsara be i Sony. Misaotra ahy Ohlove, mamonjy vondrona vorona anao ianao. Hiresaka aminao izahay rehefa avy eo raha te hahita lahatsoratra iray omaly ianao teo amin'ny fantsom-pahitalavitra tsindrio eto ary raha te-hisoratra anarana amiko ianao dia tsindrio eto raha te hahita ny lahatsoratray ianao omaly tsindrio ity boaty ity, ary raha mbola tsy nisoratra anarana ianao mankany amin'ny fantsinay, kitiho eto ny olona
kafe be loatra
Voadona ve ny hazakazaka 3 sa tsia?
Hazakazaka 3nahazo tsikera ratsy be avy amin'ireo mpitsikera, saingy noho ny fanbase an'i Salman KhanHazakazaka 3tsy diso amin'ny Fanangonana Box Office.Hazakazaka 3navoaka tamin'ny efijery 4300 teo ho eo. Ny sarimihetsika dia nanjary iray amin'ireo avo lenta indrindra tamin'ny taona.Hazakazaka 3nahazo 28,01 crores tamin'ny andro fanokafana.
Voadona ve sa mihodinkodina?
Fokonipoitra fahombiazana lehibe teo amin'ny biraon'ny boxe, nahatratra 42,45 crore manerantany tamin'ny teti-bola 46 crores, ary iray amin'ireo sarimihetsika Bollywood nahavory avo indrindra tamin'ny taona.
Inona no atao hoe hazakazaka?
nyhazakazakadia vondron'olombelona mifototra amin'ny toetra toetoetra na fiaraha-monina nizara ho sokajy heverin'ny fiarahamonina ho miavaka. nytenydia nampiasaina voalohany hilazana ireo miteny amin'ny fiteny iraisana ary avy eo hanondroana ny fiaraham-pirenena.
Voadona ve i Raees sa misidina?
Maneran-tany,Raeesnahatratra 304 crore (43 tapitrisa dolara amerikana). Io no nahatonga azy ho sarimihetsika Bollywood avo indrindra tamin'ny 2017 tamin'izany fotoana izany, ny famoahana ny volana janoary farany avo indrindra ho an'ny horonantsary Hindi hatramin'ny 1994, ary iray amin'ireo sarimihetsika Indiana 20 avo lenta indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Misy haingam-pandeha ve ny Race 3?
Inona avy ireo firazanana 5 an'ny olombelona?
(A) Ny foto-kevitry nyhazakazaka dimy: Afrikana, aziatika, eoropeanina, tera-tany amerikanina, ary ranomasina. Araka io fomba fijery io, ny fiovaovan'nyfirazananalehibe, ary araka izany, ny tsirairayhazakazakadia sokajy misaraka. Ankoatr'izay, ny tsirairayfirazanananoheverina fa manana ny maha izy azy ny fototarazo.
Inona ny teti-dratsy amin'ilay sarimihetsika Foko?
Matahotra i Jesse fa lafo loatra izany, nefa manizingizina izy ary nilaza fa natao hanao zavatra lehibe izy. Nanao veloma ny rainy izy ary nanome valopy iray $ 2 ho azy. Ao amin'ny kianjan'ny oniversite lehibe dia misy ny hazakazaka amina hazakazaka ary tsy dia tsara loatra ho an'ny mpanazatra Larry Snyder (Jason Sudeikis) ny zavatra.
Iza no talen'ny horonantsary Race?
Race dia sarimihetsika mpampientanentana Indiana 2008 notarihin'i Abbas-Mustan ary novokarina teo ambanin'ny sainan'ny Tips Films. Ny andiany voalohany amin'ny andiana horonantsary Race, mihetsika malalaka ilay sarimihetsika amin'ny sarimihetsika amerikana Goodbye Lover tamin'ny taona 1999.
Taiza no nitrangan'ilay sarimihetsika Race in Canada?
Race (sarimihetsika 2016) Ny sary fototra dia natomboka tamin'ny 24 Jolay 2014, tao Montreal, Canada. Forecast Pictures, Solofilms, and Trinity Race no namokatra ny sarimihetsika, notohanan'ny fianakaviana Owens, ny Jesse Owens Foundation, ny Jesse Owens Trust ary ny Luminary Group. Nahazo mari-pankasitrahana efijery efatra an'ny kanadianina, anisan'izany ny mpilalao tsara indrindra ho an'i James.